Sein Lyan - စိ န် လျှံ: BREAKING NEWS for Ko Bo
Writer Sein Lyan Time 3:09 pm
What ?????????????? Who is girl and Who is guy ? really confused. Both are men right ???????? :P
အယ်...စိတ်ဝင်စား စရာလေး...ဒါပေမယ့် နောင့် က မသိလို့ မနေ့ည က ၁၂ နာရီမတိုင်ခင်လေးမှာ birthday wishes SMS ပို့လိုက်သေးတယ်။း)) သူ မက်ဆေ့ပြန်တော့ ၁၂ ခွဲ .... သနားပါတယ်...ဦးဘို ကြီး။ သတင်းလေးတွေ မြန်မြန်တင်ပါဗျို့....သိချင်လှပြီ။
ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ ၊ မြန်မြန်တင်ပါ၊ စောင့်နေတယ်
ဘတ်ဒေးwish ကလုပ်ပြီးသွားပြီ။ မက်ဆေ့နဲ့ရော ဖေ့ဘွတ်မှာရေား))))))))))
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေကို အမှတ်တရ ဖြစ်ပါစေ။
HAPPY BIRTHDAY UNCLE BO :)
တို့သာဆိုရင် အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားမယ။် မနက်ကတည်းက........
ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူတွေ နဲ့အတူမနေတော့ဘူး လိုက်မ၇ှာပါနဲ့တော့လို့လဲစာရေးခဲ့မယ်။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်.. ကိုဘို ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဆင်းခဲ့...း)
Happy Birthday ko bo... ;)
ံHaPpY bIrThDaY ပါ ကိုဘိုဘို.... (သို့) နစ်ခ်နိမ်း များစွာပိုင်ရှင်...